ပင်လယ်ပြင်မှ နိဗ္ဗာန်ဘုံလေး ဆိတ်ကျွန်း – YANGON STYLE
ကျောက်ဖြူရောက်လို့ ဆိတ်ကျွန်းကိုမရောက်ရင် ခေတ်မမီဘူးတဲ့လေ….. အဲ့လိုနဲ့ ပဲ ရခိုင်မှာ ပိတ်မိပြီး ကျွန်းပတ်နေတဲ့ မိသဒ္ဓါတစ်ယောက် ဆိတ်ကျွန်းကိုသွားဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ဆိတ်ကျွန်းဆိုတာ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့နဲ့ မနီးမဝေးမှာရှိတဲ့ အရမ်းကိုသာယာလှတဲ့ ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ့။ ဆောင်းရာသီဆိုတာ ဆိတ်ကျွန်းကို အသွားများဆုံးအချိန်လေ။ ကျောက်ဖြူမြို့က လူတွေအကုန် ဆိတ်ကျွန်းရောက်နေတာလားလို့တောင်မှတ်ရပါတယ်။ သွားကြမှာပေါ့ နီးနီးနားနား Day trip သွားစရာ ဒီလောက်လှတဲ့ ကျွန်းတစ်ကျွန်းလုံးရှိနေတာကို
သဒ္ဓါတို့ကတော့ ဓာတ်ပုံလှလှလေးလိုချင်လို့ လူရှင်းတဲ့ တနင်္လာနေ့ကိုရွေးပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ Weekend ဆိုရင်တော့ ကျွန်းမှာ နေစရာအတော်ရှားပါလိမ့်မယ်နော် !
ကျောက်ဖြူမြို့ကနေဆို စက်လှေနဲ့ ၄၅ မိနစ်လောက်သွားရပါတယ်။ စက်လှေခကတော့ စက်လှေအမျိုးအစား၊ လူဦးရေပေါ်မူတည်ပြီး အစားစားရှိပါတယ်။ သစ်သားလှေအကြီးနဲ့ကတော့ ပိုစိတ်ချရပြီး Safe ဖြစ်ပါတယ်။ စျေးလည်းပိုကြီးပါတယ်။ သဒ္ဓါတို့ကတော့ လူ ၁၀ ယောက်ဆိုတော့ ဖိုက်ဘာစက်လှေပဲငှားပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ စက်လှေခက ၄သောင်း နဲ့ ၃သောင်းခွဲ ဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်။ ပုံမှန်စျေးပါပဲ။ ၁၀ ယောက်လောက်စီးတာအကောင်းဆုံးပါ။ စက်လှေတွေ ဘယ်မှာငှားလို့ရလဲဆိုတော့ ကျောက်ဖြူမြို့ရဲ့ အထင်ကရဖြစ်တဲ့ ဂျပန်မဆိပ်မှာ သွားငှားလို့ရပါတယ်။ ကျွန်းကိုစထွက်ရင်တော့ မနက်စောစော ၆:၀၀ ဝန်းကျင်လောက် စထွက်တာအကောင်းဆုံးပါ​။ နေလည်းသိပ်မပူသေး၊ လှိုင်းလေလည်း ငြိမ်သေးတော့ အဆင်ပြေတယ်လေ။ နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာက Life Jacktet ပါ။ စက်လှေမှာမပေးပါဘူး။ ငှားမယ်ဆို ကျောက်ဖြူဟိုတယ်ဘေးက SM store မှာ တစ်ခုကို ၁၀၀၀ နဲ့ငှားလို့ရပါတယ်​။ သွားမယ့်ရက်မတိုင်ခင်ကြိုငှားမှရမယ်နော်။
Page Link – https://www.facebook.com/SM-Store-Service-111787224064463/
ဒီလို အဝိုက်တွေ ၃ ၄ ခုလောက်ရှိတယ်
ဆိတ်ကျွန်းသွားရင် ဘာတွေလိုမလဲ ?
ဆိတ်ကျွန်းကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်ပြီဆို အဓိက ကတော့ စားစရာနဲ့ ရေပါ။ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်းပေါ်မှာ ဘာစားစရာမှမရှိပါဘူး။ အိမ်ကထမင်းဟင်းတွေ ချက်သွားကြပါတယ်။ သဒ္ဓါတို့ ငပျင်းအုပ်စုကတော့ Ready made တွေပဲဝယ်သွားပါတယ်။ ထမင်းမစားချင်လို့ပါ
မနက်စာကတော့ ဝယ်သွားပြီး စက်လှေပေါ်မှာပဲ ကြိတ်လိုက်ပါတယ်။ ရေဘူးနဲ့ ဖိနပ်မပါနွေခါမှသိမည်။ အဲ့ဒါတော့ ထွေထွေထူးထူးပြောစရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်းပေါ်သွားမယ်ဆိုရင်
Suncream (မေ့ရင်တော့ ကိုယ့်ပါကိုအမဲခံနော်)
ဦးထုပ် (သို့) ထီး
ကိုယ်တွေအဖွဲ့ကတော့ Sound Box ကြီးပါသယ်ချလာတယ်။
ဆိတ်ကျွန်းဆိုတာ တကယ်ကိုလှတဲ့ကျွန်းပါ။ ရေအရောင်ကအစ အုန်းပင်အဆုံး ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် သိပ်လှပါတယ်။ ဒို့ကျောက်ဖြူမှာလည်း ဒီလို ပြာလဲ့ပြီး ကြည်တောက်နေတဲ့ရေအရောင်ရှိတဲ့ ကျွန်းမျိုးရှိပါလားဆိုတာ ဆိတ်ကျွန်းကိုရောက်မှ တကယ်ယုံသွားတာပါ။ ဆိတ်ကျွန်းရဲ့ side နှစ်ဖက်က တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက်အလှချင်းတောင် မတူပါဘူး။ တစ်ဖက်အခြမ်းက အုန်းပင်တွေ ပြာလဲ့နေတဲ့ ရေတွေနဲ့လှသလို အနောက်ဘက်အခြမ်းကတော့ ရှည်လျားတဲ့ ကျောက်တန်းကြီးတွေနဲ့ အင်မတန်လှပါတယ်။ ဆိတ်ကျွန်းအထိ ဂုံးလာတူးကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ ကျွန်းကိုတစ်ပတ် ပတ်မယ်ဆိုရင် ၄၅ မိနစ် ၁ နာရီလောက်ကြာပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ့်အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး ဒီထက်လည်းပိုကြာနိုင်ပါတယ်။ နောက်တခုသိရတာက ဆိတ်ကျွန်း မဟုတ်ပဲ ဆိပ်ကျွန်းလို့လည်း ခေါ်ပါသေးတယ်။ ငါးဖမ်းစက်လှေတွေ ဒီကျွန်းပေါ်မှာ ကမ်းကပ်ပြီးရပ်နားခဲ့တဲ့ ဆိပ်ကမ်းလေးဖြစ်နေလို့ ဆိပ်ကျွန်းလို့ ခေါ်ပါသေးတယ်တဲ့။ ဒီမှာတော့ အများအခေါ် ဆိတ်ကျွန်းလို့ပဲ ရေးပေးထားတယ်နော်။ ဘယ်လောက်လှလည်းဆိုတာတော့ပုံတွေထဲမှာပဲ ကြည့်တော့နော် ……
အပြင်မှာပိုလှတာ ယုံ !
ဒါ ခုနကစိမ်းပြာနေတဲ့ရေတွေ ကျသွားတဲ့အချိန်
အရမ်းကိုပြောချင်နေတဲ့ အကြောင်းအရာကဒီမှာပါ။မြို့ပေါ်မှာ အမှိုက်ပစ်ချတာ အားမရလို့ ဆိတ်ကျွန်းအထိသွားပြီး အမှိုက်ပစ်၊ အမှိုက်ပုံလုပ်နေကြတာလားလို့တောင် တွေးမိပါတယ်။ ဘယ်လိုကြောင့်များ ကိုယ်စားထားတဲ့ အမှိုက်ကို ပြန်မသိမ်းဆည်းနိုင်ရတာလဲနော်။ သဘာဝအတိုင်းလှနေတဲ့ ကျွန်းကို ဒီလူတွေကပဲ အရောင်ဆိုးပစ်လိုက်ကြတယ်။ ကျွန်းပေါ်မှာ တောက်လျှောက် အမှိုက်တွေကိုတွေ့ရတာ အင်မတန် စိတ်ပျက်စရာပါ။ အမှိုက်ကိုပြန်မသယ်သွားနိုင်ရင်တောင် စည်းစနစ်တကျ စုစုစည်းစည်းနဲ့ အိတ်ထဲမှာ စုပြီး ထားခဲ့တာဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးကြပါ။ ဒါကိုတော့ အနူးအညွတ်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ကျောက်ဖြူမှာ အမှိုက်ကောက်ပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေရှိပေမယ့် အဲ့လိုကျွန်းအထိတော့ ဘယ်သူမှလိုက်မကောက်ပေးနိုင်ပါဘူး။ အဲ့တော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ ကိုယ်ပိုင်အသိညဏ်နဲ့ အမှိုက်ကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်စေချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်မြို့ရဲ့ Image ကိုကိုယ်တိုင်ကစပြီး မဖျက်စီးလိုက်ပါနဲ့နော်။ နောက်သွားမယ့်လူတွေလည်း ကိုယ့်အမှိုက်ကို ပြန်သယ်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စည်းကမ်းတစ်ကျ စွန့်ပစ်ခဲ့ကြပါ။ အဲ့ဒါမှလည်း ဆိတ်ကျွန်းရဲ့အလှကို ရေရှည်တည်မြဲအောင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှာပါ။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် သဒ္ဓါအနေနဲ့ ဒီနေရာကနေပဲ အနူးညွတ် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်နော်။ကျောက်ဖြူကိုလာရောက်လည်ပတ်တဲ့သူတိုင်းလည်း ဆိတ်ကျွန်းကို သွားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ သွားမယ်ဆိုရင်လည်း ရာသီဥတုအခြေနေကို နားလည်တဲ့သူနဲ့အရင်မေးပြီးမှ သွားပါလို့ အကြံပြုပရစေ။ ဆိတ်ကျွန်းအလှကို အမြဲတမ်းလှပနေအောင် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်ကြပါစေ
Instagram – https://instagram.com/aye_thader_hlaing?igshid=5pznpiv3r91u